မြန်မာဈေးကွက်တွင် New Car Toyota Innova 2020 ကားရောင်းရန်ရှိသည်
အထူးကမ်းလှမ်းမှုများ / သတင်း
ကားသုံးသပ်ချက်များ ကားစင်တာများ Comment ဆက်သွယ်ရန် လော့ဂ်အင် အကောင့်ဖွင့် အကောင့်မေ့နေတာလား
Car Id: ca612
Toyota Innova , 2020 new car for sale in Myanmar.
current price: 35,600 USD
စျေးနှုန်းညှိနှိုင်း ( မရရှိနိုင်ပါ )
အရစ်ကျ - ဝယ်ယူမှု (မရရှိနိုင်ပါ )
ဝယ်သူမည်ပေါက် ( မရရှိနိုင်ပါ )
( အရင် လောဂ့်အင် လုပ်ပါ )
သုံးသပ်ချက်ရေးရန် ( အရင် လောဂ့်အင် လုပ်ပါ )
Toyota July Promotion 01 - 31 Jul 2020
- Toyota Mingalar One Stop Service Center...
- Toyota Majesty...
- Toyota Aye and Sons - TTAS Co., Ltd. Myanmar (Dealership / Service)
- TOYOTA GW Lion
ENGINE MODEL CODE = 1TR-FE / 2.0-liter petrol engine
ENGINE TYPE = 4-cyl. in-line twin cam 16-valve with Dual VVT-i
FUEL TYPE = Petrol
TRANSMISSION TYPE = 6-speed automatic transmission
Premium and spacious seating for eight occupants and flexible seating configuration
Classy interior ambient lighting
Combination meters (4.2-inch color TFT multi-information display)
Automatic dual air conditioning system
Driver mode select switch (Power/Eco)
Display audio (AM + FM + DVD + AUX + USB + BT + 6SP)
7 SRS airbags (D+P+KNEE+.SIDE+CURTAIN)
Child restraint system (ISO-FIX + tether anchors)
Parking sensors (back sonar)
ကားထုတ်လုပ်သူ အကျဉ်းသမိုင်း နှင့် အချက်အလက်
တိုယိုတာ (Toyota) သည်ဂျပန်နိုင်ငံ Aichi တွင်ရုံးချုပ်ရှိသောနိုင်ငံစုံမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၉၃၇ တွင် Kiichiro Toyoda တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်၎င်းသည် volkswagaen နောက်ကွယ်မှဒုတိယအကြီးဆုံးကားရောင်းသူဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိ toyota သည် ၀ င်ငွေအရကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆင့် ၁၀ အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်တစ်နှစ်လျှင်ကားအစီးရေ ၁၀ သန်းထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
Toyota Myanmar Co. , Ltd,တိုယိုတာ၏မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲ၊ သည်သီလ ၀ ါအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅၂.၆ သန်းတန်ဖိုးရှိထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသစ်ကိုတည်ဆောက်နေသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ တွင်စတင်လည်ပတ်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ၎င်းသည်နှစ်စဉ် Toyota Hilux ပစ်ကပ်ထရပ်ကား ၂၅၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ Toyota သည်လက်ရှိတွင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရောင်းရန်ရှိသော Hilux, Vios, Rush နှင့်အခြားမော်တော်ယာဉ်များကိုတင်သွင်းသည်။ တိုယိုတာသည်လက်ရှိတွင်မြန်မာနိုင်ငံသို့နှစ်စဉ်ခရီးသည်နှင့်စီးပွားဖြစ်ယာဉ် ၂၀၀၀ ခန့်တင်ပို့သည်
Toyota Mingalar ( ကားအရောင်းကိုယ်စားလှယ် / စင်တာ )
Seller Name = Toyota Mingalar
Emails(s) = info@mgmtoyota.com
Carsdb Test Drive
Kia 'Own Kia Now Pay Later' extended to July
Bmw Free Car Check July.
Toyota July Promotion
Volkswagen "Polo 10 Promotion"
Hyundai brand new car special promotion
Mazda Monsoon Promotion
01 Jun 2020 - 14 Jun 2020
New Ford Car Myanmar June Special Offer
86 MMK Lakhs ( 10-Aug-2019 )
180 MMK Lakhs ( 21-Oct-2018 )
241 MMK Lakhs ( 10-Aug-2019 )
272 MMK Lakhs ( 10-Aug-2019 )
217 MMK Lakhs ( 10-Apr-2019 )
1,320 MMK Lakhs ( 02-Nov-2019 )
435 MMK Lakhs ( 03-Jun-2018 )
220 MMK Lakhs ( 04-Jun-2018 )
745 MMK Lakhs ( 02-Nov-2019 )
230 MMK Lakhs ( 07-Nov-2019 )
665 MMK Lakhs ( 07-Nov-2019 )
680 MMK Lakhs ( 03-Nov-2019 )
460 MMK Lakhs ( 02-Nov-2019 )
390 MMK Lakhs ( 07-Nov-2019 )
495 MMK Lakhs ( 07-Nov-2019 )
980 MMK Lakhs ( 07-Dec-2019 )
275 MMK Lakhs ( 02-Nov-2019 )
288 MMK Lakhs ( 07-Nov-2019 )
560 MMK Lakhs ( 07-Dec-2019 )
535 MMK Lakhs ( 07-Dec-2019 )
380 MMK Lakhs ( 07-Nov-2019 )
780 MMK Lakhs ( 07-Nov-2019 )
1,320 MMK Lakhs ( 01-Nov-2019 )
850 MMK Lakhs ( 07-Nov-2019 )
21,800 USD ( 15-Jun-2020 )
330 MMK Lakhs ( 07-Nov-2019 )
490 MMK Lakhs ( 02-Nov-2019 )
460 MMK Lakhs ( 07-Nov-2019 )
Mazda Other 2011
185 MMK Lakhs ( 02-Nov-2019 )
545 MMK Lakhs ( 01-Nov-2019 )
200 MMK Lakhs ( 02-Nov-2019 )
185 MMK Lakhs ( 07-Nov-2019 )
680 MMK Lakhs ( 11-Feb-2019 )
660 MMK Lakhs ( 02-Nov-2019 )
195 MMK Lakhs ( 27-Apr-2020 )
680 MMK Lakhs ( 07-Nov-2019 )
395 MMK Lakhs ( 02-Nov-2019 )
830 MMK Lakhs ( 02-Nov-2019 )
motorcarmyanmar သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်အခမဲ့အွန်လိုင်းကားဆက်စပ်မှုကြော်ငြာခြင်း နှင့် သတင်းအချက်အလက်ပေးသူ။
motorcarmyanmar ကိုဆက်သွယ်ရန် >>
Subscribe Thanks, you are subscribed
Disclaimer:We don't hold responsibility for misinformation of cars posted by individual users (although we try to validate first ) and misconduct between sellers,buyers,rentors,and leasers. For now, motorcarmyanmar does not buy, sell, import, or export cars. It only advertises and lists user cars.